Letisia: hahatratra 20.000 t ny haondrana | NewsMada
Letisia: hahatratra 20.000 t ny haondrana
Lasa ny 25 novambra teo, ny sambo faharoa nitondra letisia hiondrana any ivelany. Nilaza ny talen’ny fampiroboroboana ny eny ambanivohitra(DDR), faritra Atsinanana, Rasolondraibe Ralphe, fa nitontaly 14.676 t ny letisia efa lasa ary tombanana ho 20.000 t mandra-pahatonga ny fe-potoana farany amin’ny fiandohan’ny janoary 2019. Efa maro ny letisia miandry ny sambo manaraka ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ankehitriny.
Manara-penitra ny 60%
Araka ny fanadihadiana natao tany amin’ny Foibe mikirakira ny letisia eto Toamasina, manaram-penitra ny 60%-n’ny kalitaon’ny vokatra aondrana any ivelany, araka ny fepetra faritan’ny lalàna. Efa matihanina ny tantsaha mamatsy letisia, fantatra ny fiaviany vao miainga eny ifotony satria nasiana marika manokana. “ Isaina sady asiana marika ny fototra letisia raha vao manomboka mamelana”, hoy ihany ny DDR Atsinanana.
Niray feo koa ny mpandraharaha mpanondrana any ivelany, Rafidimanana Narison (Barikadimy) sy Botoubebe Rosin (Rosin Export), fa “voahaja ny maha olona sy ny fiarovana ary ny sakafon’ny mpiasa, ny fahasalaman’ny vokatra (fahadiovana sy fidiovana), sns.